काठमाडौं । काठमाडौंको बसन्तपुर झोछेमा कार्यालय रहेको मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले ऋणिले लिएको रकम चुक्ता गर्दा पनि धितो राखेको जग्गा अर्कै व्यक्तिलाई बेचिदिएको छ । सहकारीका अध्यक्ष मनोज बासुकलाले ऋणीले ऋण लिँदा धितो राखेको १ रोपनी १२ आना जग्गा अर्कै व्यक्तिलाई बेचेका हुन् । उनले नेटो हाउजिङ प्रालीको नाममा रहेको चोभारको कित्ता […]
सुन काण्डका अभियुक्तसँगको बयान आज सकिदै
काठमाडौं । सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या अभियागमा जिल्ला अदालत मोरङले आज बाँकी ३ जना अभियुक्तसँग बयान लिँदैछ । अदालतले आज बहालवाला एसएसपी दिवेश लोहनी सहित डिएसपीद्वय प्रजित केशी र सञ्जय राउतसँग बयान लिन लागेको हो । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३० मध्ये अदालतले हिजोसम्म २७ जना अभियुक्तको बयान लिइसकेको छ । यसअघि हिजो जिल्ला […]
काठमाडौँ, २५ वैशाख । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडित महिलाको परिपूरणलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाएको छ । आयोगले अन्य खालका पीडितले राहतस्वरुप दुईपटक रु पाँच/पाँच लाख राज्यबाट पाइसकेको अवस्थामा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितले हालसम्म कुनै पनि राहत वा परिपूरण नपाएको हुँदा सो कामलाई प्राथमिकता दिएको हो […]
काठमाडौं । पछिल्लो समय छुवाछुतका गतिबिधिमा वृद्धि भएको भन्दै दतित अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । समता फाउण्डेशनको आयोजनामा आज राजधानीमा जातीय भेद्भाव तथा कसुर र सजाय ऐन,२०६८ को विद्यमान अवस्था र ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि नेपाल प्रहरीको भुमिका बिषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् । दलित आयोगका कानुनी सल्लाहाकार तथा अधिबक्ता […]
सागर थापा बिष्णुकुमार देवकोटा नेपालगंज । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख टेक बहादुर तामाङ्गले कानुन कार्यान्वयनको दौरानमा कसैले हातहतियार सहित बाधा पुर्याए इन्काउन्टर हुने बताएका छन् । आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरुसंग कुराकानि गर्दै तामाङ्गले शान्ति सुरक्षाका सवालमा आफुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । बाँके जिल्ला आफैमा धार्मिक तथा जातीय संबेदनसील क्षेत्र रहेको भन्दै जातीय […]
काठमाडौँ । झण्डै एक महिना पहिले चैत २२ गते दरबार मार्गस्थित नाईट महल बाट पर्याटकसंग ज्यादा रकम असुलेको (ओवर विलिङ्ग) आरोपमा काभ्रेका युवराज भन्ने गंगादास लामा र राजन बस्नेत पक्राउ परे । उनीहरुलाई अनुसन्धानका लागि दरबारमार्गस्थित महानगरिय प्रहरी बृत्तमा राखिएको थियो । हिरासतमा रहँदा अभियुक्तले लगाएको झण्डै ८२ हजार बराबरको सुनको गहनाको प्रहरीले प्रशासनको जिम्मा […]
पक्राउ परेका ५० जना यातायात व्यवसायी हड्ताल नगर्ने सर्तमा हिरासत मुक्त
काठमाडौं । यातायात्र बन्दका क्रममा गत शुक्रबार पक्राउ परेका ५० जना यातायात ब्यवसायीलाई प्रहरीले मुक्त गरेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ परेका १ सय २१ जना मध्ये ५० जनालाई यातायात क्षेत्रमा हड्ताल नगर्ने सर्तमा रिहा गरिएको प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेले जानकारी दिए । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य, महासचिव सरोज सिटौला लगायत ७१ […]
धरानबाट काँकडभिट्टा जाँदै गरेको बसमा बम प्रहार, दुई घाइते
इटहरी । इटहरीमा गुडिरहेको बसमाथि बम प्रहार गरिएको छ । बम प्रहारबाट बसमा यात्रा गरिरहेका २ बालबालिका घाइते भएका छन् । धरानकी पुनम गौतमका ३ वर्षीय छोरा योजन गौतम र ८ वर्षीया छोरी हेलेन गौतमलाई बमको छर्रा लागेको छ । धरानबाट काँकडभिट्टा हिडेको सूर्योदय यातायातको मे १ ख २७३४ नं. को बस माथि बम प्रहार […]
पछि हट्याे यातायात महासंघ, अाजबाट सबै गाडी चलाउने । (विज्ञप्ति )
काठमाडौं, २२ बैशाख, सरकारले यातायातमा सिण्डिकेट हटाउन कडाईका साथ प्रस्तुत भएपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार गरेको देशब्यापी चक्काजाम शनिबारबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ मूल अान्दोलन संयाेजक याेगेन्द्र नाथ कर्माचार्यले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै आफ्नो आन्दोलन कार्यक्रम सफल भएको दाबी गर्दै शनिबारदेखि नियमित यातायात सुचारू हुने बताएका हुन् । यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त […]
बैशाखमै साउने झरी, मौसममा किन यस्तो परिवर्तन?
काठमाडौं । अबका केही दिन देशका धेरै ठाउँको मौसम बदली भइ पानी पर्ने जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अबका दुई तीन दिन धेरै ठाउँको मौसम बदली हुने र पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद् मञ्जु बासीले जानकारी दिइन्। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा दिउँसो पनि मौसम वद्ली भएर पानी पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताइन् […]